Somalia:Soo dhaweyn loo sameeyay Safiirka cusub ee Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI NEWS, TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Soo dhaweyn loo sameeyay Safiirka cusub ee Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya
Xafladan lagu soo dhaweeyanayay Safiirka cusub ee Dowladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya oo maanta ka dhacday xarunta Safaaradda Ethiopia ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirro iyo Xildhibaanno ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Shaqada iyo Horumarinta Shaqaalaha, Dhalinyarada iyo Sportiga C/nuur Macalin Maxamuud, oo hadallo soo dhaweyn ah halkaasi ka jeediyay ayaa ku dheeraaday xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Labada Dowladood, isagoo tilmaamay in Dowladda Soomaaliya ay daneeyneysa wanaajinta xiriirka wadamada deriska la ah.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda arimaha dibada Cabdi Daahir oo hadallo qiimo leh halkaasi ka jeediyay ayaa ku guubaabiyay Safiirka in uu ka shaqeeyo horumarinta xiriirka labada Dowladood.
Safiirka cusub ee Dowladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya Danjire C/Casiis Axmed oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa sheegay in uu ku dadaali doono wanaajinta xiriirka labada Dowladood, isagoo ka mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee loo soo sameeyay.
Dowladda Ethiopia ayaa ka mid ah wadamada xiligan adag Safaaradaha ku leh dalkeena Soomaaliya taas oo muujineysa sida labada Dowladood ee deriska ah ay uga go’antahay hagaajinta xiriirkooda ku dhisan iskaashiga iyo wax wadaqabsiga.
Somalia:Madaxweyne Shariif oo dhambaal tacsi ah ka guddoomay dhiggiisa Jabuuti Libya:”No Gaddafi relatives here” – Tunisia